HIFU Fekitori | China HIFU Vagadziri uye Vatengesi
2D Ganda rinosunga kuunyana kubvisa kumeso kusimudza HIFU Ultrasound
Kukwirira Kwakanyanya Kunotaridzika Ultrasound (HIFU) kunonunura kupisa simba kune ganda uye zvidimbu zvidiki zvinogona kukurudzira nekumutsiridza collagen yeganda uye zvichidaro nekuvandudza magadzirirwo uye kudzikamisa kutsvedza kweganda. Inonyatso gonesa mhedzisiro yekusimudza kumeso kana kusimudza kwemuviri pasina kuvhiya kwakashata kana majekiseni, uyezve, bhonasi yakawedzerwa yeiyi nzira ndeyekuti hapana nguva yekudzikira uyezve, inoshanda zvakaenzanirana kune vanhu vemavara ese eganda, mu kupesana neiyo yemalaser uye iwo akanyanya kupisa mwenje. Iri kudziya yakananga kumatishu akadzika, kuitira kusimudza ganda.Iyo inoitwa muhofisi e iine chete gel ye ultrasound inoshandiswa paganda. Mufananidzo weiyo ultrasound screen unobvumidza chiremba kuti afungidzire iyo nhanho yekurapwa pasati simba raiswa kune yakatarwa nyama. Iyo yekurapa inotora kubva pamakumi mana kusvika makumi matanhatu maminitsi zvichienderana nenzvimbo (nzvimbo) dzakarapwa.
2 mu1 HIFU Chiso chinopesana nekukwegura uye Vaginal inosimbisa Runako
HIFU muchina ishambadziro nyowani yepamusoro-yakasimba yakatarisana ne ultrasound tekinoroji yakagadzirwa, chinja yechinyakare kumeso kusimudza kuunyana kwe cosmetic kuvhiya, tekinoroji isiri yekuvhiya, muchina weHIFU uchaburitsa yakakwira yakatarisana yekutarisa sonic simba inogona kupinda mune yakadzika SMAS fascia ganda rinenge uye coagulation yekukwira kupisa munzvimbo yakakodzera, iyo yakadzika dermis yekumutsa ganda kuburitsa yakawanda collagen uye nekudaro kusimbisa kuitira kuti ganda rive rekare.
Iyo Vaginal Inosimbisa HIFU Sisitimu inoshandisa isingasviki ultrasonic inotarisa nzira yekutarisa pane mucous membrane fibrous layer uye mhasuru yakatenderera yakanangana. Ichishandisa mafungu emagetsi sosi yesimba uye kutora mukana wekupinda kwayo uye kutarisa, iyo sisitimu inotumira simba re ultrasonic rinotarisa mune iyo lamina uye mhasuru fiber dura mune yakatemerwa kudzika. Iyo yepamusoro simba reiyo ultrasonic dunhu, inonzi yakatarisana nharaunda, inoumbwa. Mune 0.1 yechipiri, tembiricha yedunhu inogona kusvika kumusoro kwe65 ℃, saka collagen inogadziriswazve uye nyama yakajairika kunze kwenzvimbo yakatarisa haina kukuvara. Naizvozvo, iyo inodiwa yekudzika dura inogona kuwana iwo akakwana mhedzisiro ye collagen kusungwa, kurongwazve uye kumutsiridzwa. Pakupedzisira, iyo isinganzwisisike mhedzisiro yemukadzi kuomesa inoitwa.